कांग्रेसको अर्का महामन्त्री खड्का कि कार्की ?
काठमाडौं । महाधिवेशन भएको दुइ वर्ष बितिसक्दा पनि पदाधिकारी नियुक्त नगरेको भनेर निकै आलोचना बेहोरिरहेका नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले अब यसको छिनोफानो गर्ने भएका छन् । स्थगित बैठक वैशाख ७ गतेबाट जारी हुनेबित्तिकै देउवाले प्रमुख पदाधिकारीको टुंगो लगाएर फेरि केही दिन विश्राम लिने तयारी गरिरहेको उनी निकट एक पूर्वमन्त्री बताउँछन् । पदाधिकारी मनोनित गरेपछि एकहप्ता केन्द्रीय समितिको बैठक स्थगित गर्ने देउवाको रणनीति रहेको सम्बध्द सूत्रले बताएको छ ।
प्रमुख तीनमा को को ?
महाधिवेशनपछि मनोनयन हुन नपाएका प्रमुख तीन पदाधिकारीमा उपसभापति, एक महामन्त्री र सहमहामन्त्री हुन् । यी तिनै पदका लागि सभापति देउवाले निकटवर्तिसँग पटक पटक परामर्श गरेर नाम टुंगो लगाइसकेको सूत्रले जनाएको छ।
सभापति देउवाले उपसभापतिमा विमलेन्द्र निधि, महामन्त्रीमा पूर्णबहादुर खड्का र सहमहामन्त्रीमा मानबहादुर विश्वकर्मालाई मनोनित गर्ने तयारी गरेका छन् ।
महाधिवेशनमा आफूलाई निकै महत्वपूर्ण सहयोग गरेका नेता खुमबहादुर खड्कालाई देउवाले उपसभापतिमा मनोनित गर्ने आश्वासन दिएपनि वचन पूरा गरेका थिएनन् । तर अब खड्काको निधन भैसकेकाले देउवाले त्यो पदमा अरु नै नेतालाई अवसर दिनसक्ने भएका छन् ।
यता महामन्त्रीमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र बालकृष्ण खाणले समेत दाबी गरिरहेका थाहा भएको छ । खाणले यसैका लागि प्रमुख सचेतक पद अस्वीकार गरेका बुझिएको छ । कार्की पत्नी र देउवा पत्नीवीचको निकै घनिष्ठ सम्वन्धको प्रभावले गर्दा अन्तिममा पूर्ण बहादुर खड्कालाई दिन लागेको महामन्त्री पद ज्ञानेन्द्रको हातमा पर्यो भने आश्चर्य नमाने हुने एक केन्द्रीय सदस्यले सरल पत्रिकालाई बताए।
उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्री आफ्नै गुटका नेता चयन गर्न खोजेपछि नेता रामचन्द्र पौडेल पक्ष असन्तुष्ट बनेको छ । पौडेल पक्षले १२औँ महाधिवेशनपछि सुशील कोइरालाले आफ्नो पक्षमा बहुमत भए पनि देउवालाई सहमहामन्त्री दिएको नजिर पेस गर्दै एउटा पद दिन माग गरिरहेको छ । नेता पौडेलले देउवालाई भेटेर परम्परा नतोड्न आग्रह गरिसकेका छन् । देउवा पौडेललाई एउटा पदाधिकारी दिँदा पदाधिकारीमा आफ्नो बहुमत नपुग्ने हिसाबमा छन् ।
८५ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा महाधिवेशनबाट सभापति, महामन्त्री, कोषाध्यक्षसहित ६४ सदस्यीय केन्द्रीय समिति निर्वा्चित हुन्छन् । खुमबहादुर खड्काको निधनपछि कांग्रेसको केन्द्रीय समितिमा ६३ मात्र निर्वा्चित सदस्य छन् । जसमा संस्थापनको स्पष्ट बहुमत छ।
२०७४ चैत २९ बिहीबार १७:२८:०० मा प्रकाशित